MAANTA OO KALE: Goolkii 500-aad ee Lionel Messi u dhaliyey Barcelona, rikoorkii ay sameysay kooxda Arsenal & Saddexleeydii uu Ronaldo ugu shubay Man United! – Gool FM
(Yurub) 22 Abriil 2019. Aqristayaasheenna shafarta leh ku soo dhowaada xubintii maanta oo kale maxaa ka dhacay kubadda cagta, waxaana maanta ku soo qaadanaynaa Goolkii 500-aad ee Lionel Messi maanta oo kale ka dhaliyey kooxda Real Madrid, Rikoor cajiib ah oo ay samaysay Arsenal iyo Saddexleeydii uu Ronaldo Champions League kaga reebay kooxda Man United.
>- Labo sano ka hor maanta oo kale kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa u dhaliyey goolkii 500-aad ee kooxdiisa Barca tartamada oo dhan, waxaana uu ugu shubay naadiga Real Madrid.
Leo Messi ayaa u dabaal-degay maanta oo kale sanadkii 2017-kii inuu shabaqa gaarsiiyey goolkiisii 500-aad ee kooxda Barcelona, waxaana uu ka dhaliyey kulanka El Clasico.
Xiddiga reer Argentina ayaa maaliyadda ku horsiibtay taageerayaasha kooxda Real Madrid ee fadhiyey qalcadda Santiago Bernabeu kaddib markii uu goolka guusha xilli dambe dhaliyey kulankii 3-2 ay ku adkaatay kooxda Barcelona.
>- Dhinaca kale, maanta oo kale 23 bishii April sanadkii 2017-kii Arsenal ayaa noqotay kooxdii ugu horreeyey ee taariikhda tartanka FA Cup-ka ee gaarta 20 final.
Kulankan oo maanta oo kale dhacay waxa ay Arsenal final-ka FA Cup ku gaareen naadiga Manchester City oo ay kaga adkaadeen 2-1.
Waxaana Gunners oo markaas gaartay final-ka FA Cup 20 goor noqotayna kooxdii ugu horreysay ee sidaas sameysa ayaa haysata rikoorka ku guuleysiga tartankan FA Cup-ka oo waxa ay hanatay tartankan 13 jeer.
>- 16-sano ka hor maanta oo kale laacibkii reer Brazil ee Ronaldo ayaa saddexleey ugu shubay kooxda Manchester United kulan ka tirsanaa tartanka Champions League.
Maanta oo kale sanadkii 2003 ayey ahayd markii uu saddex gool ugu shubay kooxda Man United oo mininkeeda joogtay Ronaldo oo markaas ka tirsanaa Real Madrid, inkastoo Man United adkaatay kulankan haddana waxa ay ka hartay tartanka Koobka Horyaallada Yurub.
Ronaldo waa ciyaaryahanka kaliya ee saddexleey tartanka Champions League kaga dhaliyey kooxda Man United garoonkeeda Old Traffrod.
Atletico Madrid oo diyaar u ah inay Antoine Griezmann ka iibiso Barcelona haddii ay heleyso 19-sano jir ka tirsan kooxda...